မွေးကင်းစ ကလေးတိုင်း အသားဝါတတ်လား? - For her Myanmar
မွေးကင်းစ ကလေးတိုင်း အသားဝါတတ်လား?
အခုနောက်ပိုင်း မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တော်တော်များများမှာ အသားဝါတာမျိုး တွေ့နေရပါတယ်။ ကလေး အသားဝါတဲ့ အခြေအနေက ကလေးမွေးပြီးနောက် ရက် အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မွေးပြီးပြီးချင်း ၂၄ နာရီ အတွင်း အသားဝါမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သာမန်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အသားဝါခြင်းပါပဲ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ သွေးနီဥတွေရဲ့ သက်တမ်းက ၃ လ လောက် ဖြစ်တာမို့ သူတို့ စတင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၃ လ ပြည့်တဲ့အခါ အလိုလို ပျက်စီးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ် ဒါမှမဟုတ် ဖျက်ဆီးခံရတာမျိုး ရှိ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘီလီရူဘင်-Bilirubin လို့ ခေါ်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုး ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ကြောင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေမှာ အသားဝါတာကို ခံစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်က သွေးထဲမှာ အရမ်းများလာပြီဆိုရင် ကလေးရဲ့ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး မသန်မစွမ်းဖြစ်တာ၊ ဉာဏ်ရည် ချို့ယွင်းသွားတာမျိုးထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးအသားဝါတာကိုဖြစ်စေတဲ့ တခြား အကြောင်းအရင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမေနဲ့ ကလေးရဲ့ သွေးအုပ်စုမတည့်ခြင်း
အပေါင်းသွေး – အနုတ်သွေး မတည့်ခြင်း
မွေးရာပါ အန်ဇိုင်းတစ်မျိုး ချို့တဲ့နေခြင်း
စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ကလေးက ပေါင်မပြည့်ဘဲမွေးတာ၊ နေ့မစေ့လမစေ့ဘဲ မွေးတာစတာတွေကြောင့် အသည်းက ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့တာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ကလေးတွေမှာ ရေကျောက်ပေါက်ရင် စိတ်ပူရလား?
အသားဝါတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ မျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးက စပြီး ဝါတတ်ပါတယ်။ နောက်မှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကလေးရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ တခြား လက္ခဏာတွေကတော့-
ကလေးက အရမ်းကို မှိန်းနေတာ၊
မိခင်နိ်ု့ကို ကောင်းကောင်း မစို့တာ၊
အီပြီး ဂျီကျနေတာ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တင်းနေတာ၊
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတာ စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရောဂါ အရမ်း ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင် သွေးအသစ်လဲတာ စတာတွေ ပြုလုပ်ရပါတယ်။
ကြိုတင် ကာကွယ်လို့ရော ရပါသလား?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကတည်းက သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကလေးနဲ့ မိခင် သွေးအုပ်စု တည့်၊ မတည့် ၊ အပေါင်းသွေး၊ အနုတ်သွေး ဘယ်လို အခြေအနေလဲ ဆိုတာကို ကြိုတင် စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ပေါင်ပြည့်၊ လစေ့တဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖွားနိုင်အောင်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက ဂရုစိုက်ပါ။
ကျန်းမာ သန်စွမ်းပြီး ရောဂါကင်းစင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ မွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Unicode ဖြင့်လည်း အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အခုနောကျပိုငျး မှေးကငျးစ ကလေးငယျတျောတျောမြားမြားမှာ အသားဝါတာမြိုး တှနေ့ရေပါတယျ။ ကလေး အသားဝါတဲ့ အခွအေနကေ ကလေးမှေးပွီးနောကျ ရကျ အနညျးငယျအတှငျး ဖွဈတတျပါတယျ။ မှေးပွီးပွီးခငျြး ၂၄ နာရီ အတှငျး အသားဝါမယျဆိုရငျ ဒါဟာ သာမနျဖွဈလရှေိ့တဲ့ အသားဝါခွငျးပါပဲ။
ခန်ဓာကိုယျမှာ ရှိတဲ့ သှေးနီဥတှရေဲ့ သကျတမျးက ၃ လ လောကျ ဖွဈတာမို့ သူတို့ စတငျ ဖွဈပျေါပွီး ၃ လ ပွညျ့တဲ့အခါ အလိုလို ပကျြစီးသှားတဲ့ဖွဈစဉျ ဒါမှမဟုတျ ဖကျြဆီးခံရတာမြိုး ရှိပါတယျ။ အဲဒီအခါမှာ ဘီလီရူဘငျ-Bilirubin လို့ ချေါတဲ့ ဓာတျတဈမြိုး ထှကျလာပါတယျ။ အဲဒီဓာတျကွောငျ့ မှေးကငျးစ ကလေးငယျတှမှော အသားဝါတာကို ခံစားရတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ ဓာတျက သှေးထဲမှာ အရမျးမြားလာပွီဆိုရငျ ကလေးရဲ့ဦးနှောကျကို ထိခိုကျနိုငျပွီး မသနျမစှမျးဖွဈတာ၊ ဉာဏျရညျ ခြို့ယှငျးသှားတာမြိုးထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ကလေးတှမှော ရကြေောကျပေါကျရငျ စိတျပူရလား?
ကလေးအသားဝါတာကိုဖွဈစတေဲ့ တခွား အကွောငျးအရငျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
အမနေဲ့ ကလေးရဲ့ သှေးအုပျစုမတညျ့ခွငျး
အပေါငျးသှေး – အနုတျသှေး မတညျ့ခွငျး
မှေးရာပါ အနျဇိုငျးတဈမြိုး ခြို့တဲ့နခွေငျး
စတာတှကွေောငျ့ ဖွဈနိုငျပွီး ကလေးက ပေါငျမပွညျ့ဘဲမှေးတာ၊ နမေ့စလေ့မစဘေဲ့ မှေးတာစတာတှကွေောငျ့ အသညျးက ကောငျးကောငျး အလုပျမလုပျတော့တာတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အသားဝါတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ မကျြနှာ ဒါမှမဟုတျ မကျြလုံးက စပွီး ဝါတတျပါတယျ။ နောကျမှ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကလေးရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို ပြံ့နှံ့သှားတာ ဖွဈပါတယျ။
သိသာထငျရှားတဲ့ တခွား လက်ခဏာတှကေတော့-
ကလေးက အရမျးကို မှိနျးနတော၊
မိခငျနို့ကို ကောငျးကောငျး မစို့တာ၊
အီပွီး ဂြီကနြတော စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
ကလေးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက တောငျ့တငျးနတော၊
ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ ရှိနတော စတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ရောဂါ အရမျး ပွငျးထနျမယျဆိုရငျ သှေးအသဈလဲတာ စတာတှေ ပွုလုပျရပါတယျ။
ကွိုတငျ ကာကှယျလို့ရော ရပါသလား?
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျကတညျးက သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီး ကလေးနဲ့ မိခငျ သှေးအုပျစု တညျ့၊ မတညျ့ ၊ အပေါငျးသှေး၊ အနုတျသှေး ဘယျလို အခွအေနလေဲ ဆိုတာကို ကွိုတငျ စဈဆေးကွညျ့ပါ။
ပေါငျပွညျ့၊ လစတေဲ့ ကလေးတှေ မှေးဖှားနိုငျအောငျလညျး ကိုယျဝနျဆောငျကတညျးက ဂရုစိုကျပါ။
ကနျြးမာ သနျစှမျးပွီး ရောဂါကငျးစငျတဲ့ ကလေးငယျတှေ မှေးဖှားနိုငျကွပါစေ လို့ ဆန်ဒပွုလိုကျပါတယျ။
Tags: baby, Cause, Cure, Health, Infant, Newborn, normal, Prevent, Yellow fever
ရာသီ ဘာကြောင့် နည်းရတယ်!!
ဆံပင်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေသာ သိနိုင်မယ့် အခက်အခဲ(၈)မျိုး
For Her Myanmar November 8, 2018